Onye isi oche TCDD Director Uygun Eid Al-Adha - RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraOnye isi ala TCDD Uygun Ozi nke Eid al-Adha
10 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 06 Ankara, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, oru, Turkey, TCDD 0
Anyị nọ n’otu ọ andụ na obi ụtọ n’inweta mmemme ịchụ-aja ọzọ ebe ọbụbụbụbụbụbụbụbụbụbụbụbụbụbụbụbụbụbaewona na ha n’agali a n’ala anyị biela otu puku afọ.
Ọzọkwa, anyị ga-enweta obi ụtọ nke ịkekọrịta achịcha na tebụl obi, ịgachi ọtụtụ nzukọ enyi na izute ndị anyị hụrụ n'anya na mkparịta ụka.
Eid pụtara ịmaliteghachi. N’ehihie na abalị, udu mmiri na udu mmiri, n’okpuru ọnọdụ kachasị sie ike na ndị ọrụ ụgbọ oloko raara onwe ha nye na-arụ ọrụ na ndị anyị hụrụ n’anya ka ha belata ebe dị anya, anyị na-ejikọ obi na netwọ ígwè.
Anyị ga-aga n'ihu na-enye ndị na-ebugharị anyị njem njem a ngwa ngwa, nke dị mma na nke na-adịghị ize ndụ na oge ezumike a, ọkachasị usoro okporo ụzọ dị elu nke anyị mepere maka ọrụ, yana ụzọ ụgbọ okporo igwe ọgbara ọhụrụ.
Ọ ga-amasị m ikele ndị ọrụ ibe m bụ ndị na-arụ ọrụ na ọkwa niile nke ndị enyemaka na etiti na ọgbakọ mpaghara na ndị na-agbasi mbọ ike ịkwaga okporo ụzọ ụgbọ elu anyị, ma soro ezinụlọ ha kelee ha.
Ana m ekele Eid al-Adha a gọziri agọzi nke mba anyị na ụwa Alakụba, nke a na-asọpụrụ anyị ijere, na-achọ udo, udo na obi ụtọ.
Nice ememe Nice
General Director nke TCDD
TCDD General Manager İsa ApaydınOzi nke ememe nke àjà 10 / 09 / 2016 Ezigbo Ndị njem, Ezigbo Ndị Ọrụ, Dịka mba nke bi n'otu ala maka otu puku afọ; na enyi, ụmụnna na anyị na-ebi ọṅụ na obi ụtọ nke Eid al-eru karịa onye na dịgidere ruo ịkọrọ otú obi dị anyị. Onye ọ bụla oriri dị ka Ankara-Konya na anyị na-arụ ọrụ na Istanbul akara ọsọ na ụgbọ okporo ígwè, anyị njem, anyị ndị ọzọ na ụgbọ oloko n'okpuru Asian oké osimiri na Europe anyị na-eme na-ejikọ ndị Marmaray na oge a ga-anọgide na-anụcha ha hụrụ n'anya na nke a oriri. N'ihi ọrụ anyị, anyị chọrọ ịbụ ndị ruru eru nye ndị nsọ anyị bụ ndị ji ndụ ha chụọ àjà n'oge akụkọ ntolite. Maka nke a, obodo anyị dị elu na ngwa ngwa
Ozi site na Veysi Kurt, General Manager nke TCDD Taşımacılık A.Ş. 25 / 08 / 2017 TCDD Transport Inc. General Manager Veys Kurt si Eid al-Adha Message: gbanye mgbọrọgwụ anyị omenala na anyị omenala, ụmụ mgbei na ụzọ ọpụpụ na ụmụ mgbei, ndị na-emegbu emegbu ma na-enyere ndị ogbenye, ịgbatị a aka DART agbata obi agụụ na-agụ nri alakpu ụra a n'ebe niile. Ịtụle anyị akụkọ ihe mere eme ga-enwe na a nnukwu ike nghọta "m ziya akwụkwọ", "ọrụ ebere nkume" ke n'ubi, akpọnwụwo anyị omenala dị ka ihe ndị kasị mma ihe atụ E debere ịkọrọ. Site n'okwukwe anyị na ọgaranya nke ọdịbendị anyị, e nwere òkè, ihe ngwọta nke oge siri ike nke ndị ọzọ. Achịcha nke Àjà, ọzọ na-eme ka mmetụta ndị a dịkwuo ike, anyị ga-enyere ndị anyị hụrụ n'anya aka ibi ndụ dị mma. Dika TCDD Taşımacılık AŞ, T
TCDD General Manager İsa ApaydınOzi Eid Al-Adha 25 / 08 / 2017 Anyị na-enwe ọṅụ ma na-enwe obi ụtọ nke inwe ọtụtụ oriri nke ọbụbụenyi, òtù ụmụnna na ikerịta. Ebe ọ bụ na a nakweere 2003 afọ dịka ụzọ isi njem ụgbọ njem, ọnụ ọgụgụ ntinye ego maka okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè anyị karịrị nnọọ 60 ijeri ijeri. Anyị malitere ịchịkọta obodo anyị na ụgbụ ígwè, karịsịa ụgbọ okporo ígwè dị elu na ngwa ngwa. Ankara-Istanbul, Ankara-Konya na Konya-Istanbul n'etiti 33 ịrịọ xnumx'n percent of Turkey bi km ogologo na elu-ọsọ okporo ígwè 1.213 nde, Asia na Europe bụ ndị mpako na-enwe agaghị echefu echefu njem anyị Marmaray'l nwekwara 34 nde njem na ijikọta n'okpuru oké osimiri anyị na-ebi. Nnukwu ọsọ Yüksek
TCDD General Manager İsa ApaydınOzi Eid Al-Adha 19 / 08 / 2018 Dị Oké Ọnụ Ahịa njem, Ezigbo ọrụ ibe, enyi, ụmụnna, na anyị na-ebi a Kurban Bayram n'ihu convergence nke ọṅụ na obi ụtọ na ahụ ruru ha kasị elu òkè mmetụta. Iji mee ka mba anyị dị elu karịa ọkwa nke oge a, agha anyị, nke malitere na president nke president, na-aga n'ihu ngwa ngwa. Anyị na-agbasi mbọ ike na mmepụta mmepụta ụlọ na nke mba, nke na-eme ka ndabere nke nnwere onwe akụ na ụba nke mba anyị. Ankara-Istanbul, anyị na-arụ ọrụ abalị na ehihie ịmụba ọnụ ọgụgụ nke Ankara-Konya na Konya-Istanbul n'etiti anyị na-efe xnumx'n percent nke anyị bi 33 km nke elu-ọsọ na elu-ọsọ okporo ígwè netwọk na YHT-ojii na elu-ọsọ okporo ígwè e. Anyị malitere na-eme ka anyị na lọjistik isi ke Turkey na mpaghara ...
Ozi site na Veysi Kurt, General Manager nke TCDD Taşımacılık A.Ş. 20 / 08 / 2018 Ndị njem dị oké ọnụ ahịa, ezumike okpukpe, ịdị n'otu na ịdị n'otu nke mmetụta uche anyị na-eme ka obi sie anyị ike, a na-eme ka obi dị na bridges, ịkekọrịta na ịdị n'otu nke ịma mma nke ụbọchị dị iche iche. Oge ndị a na-enweghị atụ ga-abawanye uru mgbe ndị anyị hụrụ n'anya nọnyeere anyị. Dị ka TCDD Tasimacilik AS, anyị weere ihe niile anyị mere ka anyị wee nwee ike ibi ndụ n'udo. ụbọchị; Igbe 25 na ụgbọ elu dị elu, 45 bin na ụgbọ okporo ígwè, 250 puku ndị njem na Marmaray na Başkentray; Ugboro nde 100 dị n'ụgbọ okporo ígwè na-azụ ụgbọ okporo ígwè anyị, Istanbul-Ankara YHT akara, karịsịa na nke ndị njem na ụbọchị nke ndị njem, ụgbọ elu ndị ọzọ ma ọ bụ ihe mgbakwunye ụgbọ ala 54 puku oche oche
Ozi si n’aka General Manager Erol Arıkan 10 / 08 / 2019 N'afọ 1300, ọkà mmụta okpukpe Alakụba Ibn Khaldun kwuru na mwepu nke ịdị n'otu n'etiti ọha mmadụ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa nyere aka na ndakpọ nke ọha ahụ. Ọ ga-amasị m iji obi ụtọ gosipụta na anyị nwere mmetụta na ịdị n'otu anyị na ezumike okpukpe anyị, njirimara anyị ndị mara mma na-eme ka anyị, ka anyị na-ebi ndụ dị ka obodo, anyị na-ejikọkwu ọnụ, na-ewusi ọgụgụ isi anyị ike na anyị ga-adị ike ọnụ. N'ime nghọta a, 7 / 24, 365 TCDD Dgbọ njem na-enye ọrụ ụgbọ njem kwa ụbọchị. Anyị na-arụ ọrụ ọtụtụ narị ndị njem na ụgbọ oloko kwa ụbọchị, na-ebuga ọtụtụ puku ndị njem na ọtụtụ puku tọn ibu n'enweghị nsogbu ma tinye ụgbọ oloko ọhụrụ anyị na njem ahụ. N'ọnọdụ a, Eastern Express Ankara
Ụgbọ njem-Sen TCDD General Manager Uygun Ezi nleta nleta 21 / 02 / 2019 Onye isi ụgbọ njem-Sen onyeisi oche Kenya Kenan Caliskan na onye isi oche onyeisi oche, Ali Ihsan Uygun, bụ ndị a họpụtara dịka Onye isi nchịkwa nke Turkish State Railways, mere nleta dị mma. Ụgbọ njem Memur-Sen onyeisi oche Kenya Kenan Caliskan na onye isi oche onyeisi oche Atilla Demirtunc, Ibrahim Uslu na Mehmet Yildirim, bụ ndị a họpụtara dị ka onye isi osote Director nke TCDD Ali Ihsan Uygun'a nwere ezigbo nleta. Onye isi ha na Deputy onyeisi oche Uslu, Demirtunç na Yıldırım, Director General nke Turkish State Railways kwuru na ha chọrọ ịga nke ọma n'ọkwá ọhụrụ ya.
Nlekọta YOLDER Na-eleta TCDD General Manager Ali İhsan Uygun 25 / 06 / 2019 Onye isi oche YOLDER Şakir Kaya na Onye isi oche oche Suat, TCDD General Manager Ali İhsan Uygun, Isi nke Ngalaba Nlekọta Ersoy Ankara, Onye isi oche Uğur Açıkgöz, Ngalaba Ndị Ọrụ Nchịkwa President Mustafa Gediz, Ọrụ Nchịkọta Ọrụ Manager Ergünay Oak na Mmezi Ngalaba Onye Ọrụ Nchịkwa Mmadụ Menduh Türk zutere. N'agbanyeghị usoro ọrụ ya, YOLDER Management, onye gara NCD Manager General Ali İhsan Uygun nọ n'ọfịs ya, wepụtara oge dị ukwuu na YOLDER ma hapụ nzukọ ahụ afọ ojuju. Ụlọ Ọrụ Nlekọta na Ndozi Nweta, Ụzọ na EST ...
TCDD General Manager İsa ApaydınOzi nke Ramadan 05 / 07 / 2016 Anyi na-enwe obi uto na obi uto nke ime ememe Ramadan nke enyi, umunwanyi na ndi ozo di na elu ya. Nke a oriri na Ankara-Eskisehir-Istanbul, Ankara-Konya na ngwa ngwa ịrụ ọrụ nke Konya-Istanbul akara, ala nakwa ọsọ nke anyị ụgbọ oloko, Marmaray'l na Istanbul na ga-anọgide na-eme ka ọnụ na ndị hụrụ anyị njem na anyị ot ụgbọ oloko. Dị ka otu n'ime Turkey kasị ike oru, anyị arụnyere 160 afọ mba anyị, anyị nwere a akụkọ ihe mere eme ibu ọrụ idu efe na elu-ọsọ na elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè e, ụgbọ okporo ígwè na ehihie na abalị, anyị na-anọgide na-ime nke ugbua. Onye kachasị òkè na mmezu nke ọrụ anyị, nke dabeere na ọdịmma nke mba anyị na obi ụtọ nke ụmụ amaala anyị, na-etinye mgbe nile na iziga
Ozi si n'aka Onye isi oche TCDD. 24 / 06 / 2017 TCDD Transport Inc. General Manager Kurt Eid al-Fitr Message: ihe na-eme ka anyị niile ụmụ mmadụ, otu n'ime ihe ndị kasị mkpa atụmatụ na-eme ụwa anyị bụ richness nke ime mmụọ anyị. Okpukpe anyị na-eme ememme, ịdị n'otu, nkekọrịta, udia anyị mmetụta ịhụnanya na nkwanye ùgwù, sikwuo anyị ịdị n'otu na Ballad, nke di ọcha ime mmụọ anyị ụwa, na-enye ahụkebe ike ụbọchị. Ịbụ ndị anyị hụrụ n'anya bụ isi iyi nke obi ụtọ. TCDD Transport Inc., Eid al-Fitr ke njem dokwuo anya anyị hụrụ n'anya, na-enye ezumike ọṅụ na-ebi ndụ na ụzọ kasị mma, elu-ọsọ, ot na ewerewo ihe na-enye ihe kasị mma anyị ọrụ ke Marmaray. Dị ka ndị ezinụlọ TCDD Transport, na-atụle ka ndị njem na-arịwanye elu na njem n'oge ezumike, D
TCDD General Manager Uygunun Erimeri nke Sacrifice Message
Ozi site na Veysi Kurt, General Manager nke TCDD Taşımacılık A.Ş.
Ụgbọ njem-Sen TCDD General Manager Uygun Ezi nleta nleta
Ozi si n'aka Onye isi oche TCDD.